आयो अत्यन्तै दु’खद् खबर, अफ’गानि’स्तानको बामियान शहरको बीच बजारमा श’ क्तिशाली वि’ ष्फोट, १७ जनाको मृ’ त्यु, ५० बढी घा’ इते | Public 24Khabar
Home News आयो अत्यन्तै दु’खद् खबर, अफ’गानि’स्तानको बामियान शहरको बीच बजारमा श’ क्तिशाली वि’...
आयो अत्यन्तै दु’खद् खबर, अफ’गानि’स्तानको बामियान शहरको बीच बजारमा श’ क्तिशाली वि’ ष्फोट, १७ जनाको मृ’ त्यु, ५० बढी घा’ इते
आयो अत्यन्तै दु’खद् खबर, अफ’गानि’स्तानको बामियान शहरको बीच बजारमा श’ क्तिशाली वि’ ष्फोट, १७ जनाको मृ’ त्यु, ५० बढी घा’ इते !!!
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको शवगृहमा पहिलो पटक पुग्दा निकै अत्तालिएकी थिइन् उनी। बाहिर मान्छेको भीडजस्तै त्यहाँ शवको थुप्रो थियो। कति बीभत्स ! कति भयानक ! कसैको टाउको थिएन, कसैको खुट्टा त कसैको आँखा। तर, त्यसको एक वर्षपछि भने उनलाई शवहरूसँग डर लाग्न छाडेको छ।
महिलाले दिएको दागबत्तीले आफूलाई चिनाएको उनको बुझाइ छ। ‘हुन त छोरी मान्छेले दागबत्ती दिन हँुदैन भन्ने समाज हो हाम्रो। मलामी जान हुन्न भनेर अझै पनि रोकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘आज छोरी मान्छेले दिएको दागबत्तीले मलाई चिनायो। यति पवित्र काम छोरीले गर्न किन नहुने भनेर देखाउन पनि केही गर्न जरुरी थियो।’
एक दिदी र दाइकी प्यारी बहिनी सपना घरकी कान्छी छोरी हुन्। घरमा कुनै कुराको अभाव थिएन। मागेको कुरा पुर्‍याइदिन्थे परिवारले। गाउँकै महेन्द्ररत्न उच्च माविबाट २०७३ सालमा राम्रै नम्बर ल्याएर एसईई उत्तीर्ण गरिन्। पढाइलाई अगाडि बढाउन बेनी झरेपछि भने उनलाई ‘सहरी वातावरण’ले छोयो। गलत संगतमा परिन्। कलेज छाडेर बुटवलतर्फ हिँडिन्। केही समय सडक बालबालिकाजस्तै सडकसम्मै पुगिन्। निकै हन्डर, दुःख खेपिन्।
उनी बल्लतल्ल सम्हालिएर बुटवलबाट म्याग्दी फर्किइन्। दाजु र दिदी विदेशमा रहेकाले उनी पनि विदेशै जान भनेर काठमाडौं आइन्। त्यहीबेला उनको भेट विनयजंग बस्नेतसँग भयो। जो उनकी साथी सलिनाका बुवा हुन्। बस्नेतसँगको संगतले उनमा सामाजिक सेवाको भावना पलायोे।
पहिलो पटक एक युवतीको शव जलाउँदै गर्दा उनी नराम्ररी झस्किएकी थिइन्। निकै नमज्जा लाग्यो। को थिइन् होला ? के भएर मरिन् होला ? यस्तै अनुत्तरित प्रश्नले उनलाई पिरोलिरह्यो। उनले केही वर्षअघि सडकसम्म पुगेको आफ्नै जिन्दगी सम्झिइन्। भनिन्, ‘धन्न म त्यो अवस्थासम्म पुग्न परेन।’
विनयजंगका अनुसार सपना दृढ आत्मविश्वास भएकी छोरी हो। उसमा काम गर्ने अठोट र लगनशीलता छ। ‘सपनाको यो सफलता साँच्चिकै अदभुत छ मेरा लागि। ऊ आफ्नो बाटो आफैं बनाउन तल्लीन हुन्छे सधैंभरि’, उनले भने, ‘मानवीय कर्ममा तल्लीन सपना रोका तिमी यसरी नै सत्कर्म गर्दै जानु। हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार
Previous articleश्रीमानले श्रीम”तीलाई खुकु’रीले २ टुक्रा पारे, ठाउँको ठाउँमै सि ध्याए, झापामा हेर्नुस्
Next articleभारतलाई रुसको साथ, बेइजिङमा हल’ चल, रुससँग मिलेर भारतले यस्तो गर्दै २१ औं शताब्दीकै सबैभन्दा खत ‘रनाक